Siyaasada dayrta oo bilaamatay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Siyaasada dayrta oo bilaamatay
La daabacay måndag 13 augusti 2012 kl 10.26
Jan Björklund oo Göteborg shalay ka hadlayey, oo ayna ka danbayso boondada älvsborgsbron. Foto: Adam Ihse/Scanpix.
Fasaxa sommar ayaa hada waxaa la dhihi karaa waa soo gabagaboobay. Waxaan taas cadayn u ah in hada siyaasiinta la arkayo iyaga oo talooyin iyo hindisayaal soo jeedinaya. Dhamaadkii asbuucii hore waxaa qodbado ka jeediyey meelo kala gadisan dalka hogaamiyaasha xisbiyada.
Hogaamiyaha Folkpartiet ayaa shalay hindiso ku soo bandhigay in la hirgeliyo tareen dheereeya oo socda saacadii 250 kilometer taas oo ay xisbiga ay bahwadaaga yahiin Moderaterna soo dhaweeyeen. Jan Börklund oo qodbadiisa ka jeedinayey magaalada Göteborg ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey in wadada E20 ee isku xirta Göteborg iyo Stockholm noqoto wado weyn oo ay gaadiidku dhaqso ku mari karaan.
Sidoo kale hogaamiya xisbiga Sverigedemokraterna ayaa asna qodbad ka jeediyey magaalada uu ka yemid ee Sölvesborg. Waxaa uuna dhaleeceeyey fikrada dowladda ku dhawaaqday in ay hirgelinayso ee Nystartzoner oo ah in canshuur dhimis lagu sameeyo shirkadaha ka jira deegaanada dhibka iyo shaqo laanta badan, taas oo uu ku tilmaamay in cadeyn u tahay in dowladdo ay gacanta ka taagtay arimaha isdhexgalka.
Bilowga dayrta marka laga soo noqdo fasaxa sommarka ayey xisbiyada dowladda iyo ku mucaaradka soo bandhigaan miisaaniyadooda dayrta iyo weliba hindiseyaashooda siyaasadeed.